Ozi ohuru anyi.
Gịnị bụ Polyimide?
site na nhazi na 20-04-27
A kọwara polymer dị ka nnukwu netwọk nke ụmụ irighiri ihe nke mejupụtara ọtụtụ nkeji ugboro. A polyimide bụ otu ụdị polymer, nke nwere ndị monide imide. Polyimides bụ ihe a na-achọsi ike maka nguzogide okpomọkụ ha, ike ọrụ yana ihe onwunwe. Gịnị bụ Imide? Iji nweta ...
Kedu ihe eji polyimide mee? A na-eji polyimide eme ihe maka ịsa ahụike, dịka catheters vaskụla, maka nguzogide ike ya na njikọta yana mgbanwe na kemịkal. Industrylọ ọrụ semiconductor na-eji polyimide eme ihe dị ka ihe na-agbado ọkụ; A na-ejikwa ya dị ka ihe nrụgide n'ibu. ...
Dị ka ihe eji egbu egbu, polyimide ejirila elektrik, ikuku, na ụgbọ ala na-emezu ọnụ na-abawanye ụba maka ihe ndị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'okpuru ọnọdụ ọjọọ, dị ka okpomọkụ dị elu. Polyimides bụ ngalaba dị mkpa nke polym na-eto